Ngwa ahịa na-ekpo ọkụ
Anyị pụrụ iche na mbupụ ụmụ ahụhụ ezinụlọ, ọgwụ pesticides, ọgwụgwọ anụmanụ, njikwa ijiji, API & Ndị etiti.
Nnọọ na ụlọ ọrụ anyị
Hebei Senton bụ ọkachamara mba trading ụlọ ọrụ na Shijiazhuang.Major azụmahịa na-agụnye ezinụlọ ụmụ ahụhụ, pesticides, ọgwụgwọ anụmanụ, Fly Control , API & Intermediates. Ngwaahịa a sitere na akụrụngwa ruo na ngwaahịa emechara, site na otu usoro ruo usoro agwakọta. Enwere ike ịhazi ngwaahịa dị ka ihe ndị ahịa chọrọ iji gboo mkpa ịzụrụ dị iche iche. Anyị na-agba mbọ ịnye ngwaahịa kachasị mma yana ọrụ kachasị mma iji gboo mkpa ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.
kacha ọhụrụ akụkọ & blọọgụ
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka paraquat ...
Rizobacter weputara bio-see...